Ma Dhabaa In Madaxwayne Muuse Biixi Qaar Ka Mid Ah Ganacsatada Somaliland Ka Dalbaday Lacago Amaaha + Sababta | Hangool News
Ma Dhabaa In Madaxwayne Muuse Biixi Qaar Ka Mid Ah Ganacsatada Somaliland Ka Dalbaday Lacago Amaaha + Sababta
December 6, 2017 - Written by Hangool
Hangoolnews:- Tan iyo waxii ka dambeeyay doorashadii ka qabsoontay Somaliland waxaa soo baxayay warar xoogan oo sheegaya in xukumadda xilka wareejinaysaa ay madhan yahiin khasnadii ay maamalaysay haday tahay Khasanada guud ee qaranka iyo qaybaha kale ee xisbaadka socda ee baanka Somaliland gacanta ku hayo.
Xukumadda ayaa Waxaan ay tahli la,dahay in ay dhamaystirka in ay wadda bixiso musharka shaqaalaha dowladda oo qabyo ku noqday.
Xogo xoogan oo uu helayo warsidaha Hangoolnews ayaa sheegaya in Madaxwaynaha cusub ee Somaliland ay gaadhay arrinka ah in guud ahaanba ay faaruq yihiin khasnadaha kala duwan ee baanka Somaliland,
Madaxwayne Muuse Biixi ayaa markii uu maqlay arrinkani iyo in aan la wadda siin musharkii shaqaalaha dowladda marka laga tago ciidamadda iyo macalimiinta ay hadhsan yihiin intii kale waxaa uu go,aanday in lacag laga amaahdo ganacsatada si loo dhamaystiro bixinta musharka shaqaalaha.
Todobaadyadii ugu dambeeyay ayaa waxaa warbaahintu aad u hadal haysay oo ay baahinaysay in xitaa Xukumadda Cusub ee Muuse Biixi la wareegayso lacag xad-dhaaf taas oo ah dayn lagu leeyahay Xukumadda Siilaayo.
Wasiirka wasaaradda maaliyada Somaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan ayaa aan marna hadal sababta mar qudha wadda faaruqisay xisbaadkii kala duwanaa ee qaranka.
Arrinka amaahda lacagta musharka shaqaalaha ayaa haddii uu si dhaba u soo ifbaxo waxa uu barmadow ku noqon doonaa wasaaradda maaliyadda Somaliland iyo hayadaha kale ee ay khusayso.